Dhigista Kooxda Dagaal ee Cyber
Wax ka qabashada Dhacdada
Waxaad ogaan doontaa muhiimadda ay leedahay in la yeesho lana raaco siyaasadaha iyo habraacyada CSIRT ee horay loo qeexay; Fahmaan arrimaha farsamada ee la xiriira noocyada weerarka ee sida caadiga ah la soo sheego; u qabtaan falanqaynta iyo ka jawaabida dhacdooyinka muunada kala duwan; ku dabakho xirfadaha fekerka muhiimka ah ee ka jawaab celinta shilalka, iyo tilmaam dhibaatooyinka jira si looga fogaado inta aad ka qeyb qaadaneyso shaqada CSIRT.
Koorsada waxaa loogu talagalay inay bixiso aragti ku saabsan shaqada uu qaban karo hawl-wade dhacdo. Waxay bixin doontaa aragti guud oo ku saabsan fagaaraha maaraynta dhacdada, oo ay ku jiraan adeegyada CSIRT, hanjabaadaha xadgudubka, iyo dabeecadda howlaha ka jawaab celinta dhacdada.
Koorsadani waxaa loogu talagalay shaqaalaha leh khibrad yar ama aan lahayn khibrad maaraynta dhacdooyinka. Waxay siisaa hordhac aasaasi ah howlaha ugu muhiimsan ee maaraynta dhacdooyinka iyo xirfadaha fekerka muhiimka ah si ay uga caawiso kuwa wax ka qabanaya dhacdooyinka inay qabtaan hawl maalmeedkooda. Waxaa lagula talinayaa kuwa ku cusub shaqada maaraynta dhacdada. Waxaad fursad u heli doontaa inaad kaqeybqaadato dhacdooyinka muunada ah ee aad kala kulmi karto maalinba maalinta ka dambeysa.
Koorsadani waxay uruurineysaa dhibco dhanka Masters-ka ah ee Amniga Internetka ee Machadka Injineerrada Software-ka
Tababar Online ah oo Goordhow Soo Socda
Yey tahay inuu sameeyo koorsadan?
Shaqaalaha khibrad yar u leh ama aan lahayn khibrad maaraynta dhacdada
Shaqaale khibrad u leh la tacaalidda dhacdooyinka oo jeclaan lahaa inay horumariyaan hababka iyo xirfadaha ka dhanka ah dhaqamada ugu fiican
Qof kasta oo jeclaan lahaa inuu wax ka barto wax ka qabashada dhacdooyinka aasaasiga ah iyo howlaha
Koorsadani waxay kaa caawin doontaa inaad
Hawlgeli shaqaalahaaga si ay uga difaacaan meheraddaada weerarka internetka.
Aqoonsiga muhiimada ay leedahay in la raaco habab si wanaagsan loo qeexay, siyaasado, iyo nidaamyo ganacsigaaga ah.
Fahmaan arrimaha farsamada, isgaarsiinta, iyo iskuduwidda ee ku lug leh bixinta adeegga CSIRT
Si taxaddar leh u falanqee oo u qiimee saameynta dhacdooyinka amniga kombiyuutarka.
Si wax ku ool ah u dhis oo iskuduwaya istaraatiijiyadaha jawaabta ee noocyada kala duwan ee dhacdooyinka amniga kombiyuutarka